Dabballee Mootummaamoo Raajii Waaqayyooti!?/የመንግስት ካድሬ ወይንስ የኢግዝያብሕር ነብይ? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDabballee Mootummaamoo Raajii Waaqayyooti!?/የመንግስት ካድሬ ወይንስ የኢግዝያብሕር ነብይ?
#Dabballee Mootummaamoo Raajii Waaqayyooti!?/የመንግስት ካድሬ ወይንስ የኢግዝያብሕር ነብይ?
Ani hordofaa amantii Pirotestaantiiti. Dubartii #Raajii ofiin jettee waliin dhooftu kana garuu nan morma. Elaamee, warri #Debuub isheen jettu kun waggaa muraasaa duraa ka’anii waa’ee ofiin of bulchuu gaafataa turan. Baayyinni isaanii baayyina warra Tigiray gadi miti. Heera mootummaa bu’uura godhatanii gaafatan. Isheen garuu Bofaafi Jawweetu irra ciisa; Waaqayyo mootummaa kanatti dabarsee kenneera jechuun Alaabaa Itoophiyaa rarraafattee waltajjiirra baatee uummata boossifte. Elaamee namana, Mootummaan gaaffii mirgaa deebisuurra ilmaan cunqurfamaa lubuu 200 ol guyyaa tokkotti barbadeesse. Kan dhume lubbuudha. Kan isaan gaafatan mirga. Cubbuun isaanii maal ture? Ammagaa Mootummaan qulqulluu ta’eetu Uummanni Hawaasaafi Sidaamaa cubbamaa ta’e?
Raajonni durii warri ani Macaafa qulqulluu keessaa dubbisee beeku akkana miti. Mootummaafi uummata gidduu dhaabbatanii haqa raagu. Ergaa Waaqayyorraa fudhataniin Mootummaas uummatas ifatu. Ati garuu alaabaa rarraafatteetu Waaqayyo mootummaatti dabaree diina kana kenne jette.
Animmoo dabareekoon sirratti raaja. Hafuura sobaa kana soomaaf sagada qabadhuuti sakatta’i. Waaqayyo Waaqni cunqurfamaafi warra sagalee hinqabnee maal siinjedhaakka siif hinkennineef of eeggadhu; qalbiis jijjiirradhu! Kanuma!!
Shukshukta (ሹክሹክታ) – የነብይት ብርቱካን ጣሰው የግድያ ሙከራ | የባለስልጣናት ቪድዮ ተሰረቀ | Prophet Birtukan